Hoyga Barasha Culumta Computer-ka | somitpro
Save Your Time, Save Your Money, And Get High Education.
Dooqo xirfada rabtid inaad baratid kuna noqo xariif.
Qaado shahado cadeyso xirfada aad bbaratey.
ku shaqeyso xirfada bararatay adigo joogo hoygaaga.
Complete adobe photoshop waa kooris dhameystiran kaso aad ku baran dontid gabi ahaan adobe photoshop qaabka u shaqeyso waxana loogu talagay koriskan ardayda kucusub photoshop iyo kuwa donayo xirfadoda sare u qadan koriskan waxad ku baran donta
Si aad ula janqadid asaagada kuso biir shabakada somitpro xubina kanoqo maanta.
Dooro xirfada rabtid inaad baratid adigoo ka dooqanaya xirfadaha kujira shabakada.
Bixi qidmada kooriska ama xirfada ad rabtid inaad bartid si eey ugu furmaan cashirada.
Baro xirfada juhdi iyo dadaalna la imaaw xogana saar sidi ad ugu mira dhalin laheyd.
Qaado aqoonsi ama shahaado cadeynayo xirfada aad baratay kuna shaqo raadso.
Ku Shaqeyso Xirfadada
ku shaqeyso xirfada aad baratay maanta adigo jogo hoygada ama ku shaqo raadso.
Adeegyada An bixino
Cashiro Bilaash Ah
Kooris walbo waxa kujiro cashiro bilaash oo ardayga si qimeyn karo intusan xubin ka noqan kahor.
koorsoyinka shabakada ku jiro wa la cosboneysin dona ama [Update] hadi barnamijka version cusub so baxo.
Cawinad Jogta Ah
Ardayda xubinta ka ah shabakada waxe heleyaan cawiad wixi ku adkadana ama ee fahmi wayana laga sacideyn dono insha allah.
waxa jiri doona tartamo loo qaban dono ardayda isku korsada barto kuso an godon sin dono abaal marino.
Barnamijyo Iyo Qalabad
Ardayda xubinta ka ah korsoyinka waxe si bilash ah ku helayaan barnamijyada iyo qalabadka la socda koriska.
Waa hubaal arday walbo ino ka bixi dono somitpro, asigo ku qanacsan xirfadihi oo ka bartay.
iibso labo koorso ama wixi ka badan oo hel qiima dhimis gareysa $5 fursadan waxa ka fa,ideysan kara qof walibo oo raba in u iibsado 2 koorso ama wixi kabadan.
This is the best website that I have taken the photoshop course and olso Teacher Hamari is very active Teacher for Graphic Design I say Dear Teacher Thanks For your Supporting and Guidunce ....
Abdirahman Farah Graduated Student
Waxan ahay ardayad ka fa,ideysatay websitekan korsoyinka oo bixiyan khastan adobe potoshop aniga oo kahelay sida wanagsan ee cashirada u sharaxan yihiin ahna mid qof walibo uu fahmi karo mahdsnidin bahda somitpro.
Nuura Axmed Graduated Student
Waxan aad ugu mahadcelinya dhaman somitpro macaliminteda waxan ka faidey waxyaabo an halkan laguso koobi karin ayna kaw ka tahay inay iga jaahil bixiyen adobe photoshop isticmaalideda runti aad ban idinku mahadcelinya dhamantin wxanad haysan shaqo wanagsan.
Fahad ahmed Graduated Student
Runtii waxa xusid mudan in maanta dalkeena aan ka helayno website sida somit pro oo kale ah oo kaa haqab tiraya waxa casrigan la isticmaalo waliba dhinaca nashqadeynta isla qiimo aad u jaban, Runti waxan ku faanya inaan ku shaqeeyo xirfad aan muddo kooban ka hor ka bartay somit pro,
Abdishakour hersi Graduated Student
Somitpro waa meel runtii aan ka helay barashada graphic design gaar ahaan aan ku amaani karo sida quruxda badan ee nidaamsan ee loo habeeyay muuqaalada, Somitpro waa kaabaha ruux walba oo hadaf leh. Mahadsanidiin
Abdiasis Osman Graduated Student
Somitpro waa meesha aad kaga bixi karto dhammaan baahi walba aad u qbtid naqshadaynta. Runtii wax badan ayan ka faidey xirfado cusub ayan iga koradhay hda wax walba oo design la xiriro waan isaga kalsonahy kalsoonidaasna waxaan ka helay somitpro gaar ustaad Hamari
Ahmed Salah Graduated Student